Juba, 08 July 2013 - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud iyo wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa caawa casho sharaf uu sameeyey Madaxweeynaha dalka Koofurta Suudaan ka qeybgalay. Xafladdan casho sharafta ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee dalka Koofurta Suudaan, waxaana ka soo qeybgalay Madaxweynaha Bostwana, Madaxweyne ku xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Koofurta Suudaan. Sidoo kale casho sharaftan waxaa goob joog ka ahaa Madaxweynihii hore ee South Africa Mbeki iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Ethiopia.
Madaxweynaha ayaa waxaa ku wehliyey casho sharaftan Safiirka Soomaaliya u fadhiya Koofurta Suudan Mudane Cabdiraxmaan Nur Dinaari, Xildhibaano Soomaaliyeed, La-Taliyeyaal iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha Koofurta Suudaan Mr Salva Kir oo hadalo kooban ka jeediyey xafladda cashada ayaa uga mahadceliyey madaxdii ka soo qeybgashay casho sharafta, iyo dabaaldegga maalinta xornimada dalka Koofurta Suudaan oo maalinta 09ka July 2013ka labo jirsatey.
Madaxweynaha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey South Sudan
Juba, 08 July 2013 - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud iyo wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaala madaxda Dalka Koonfurta Sudan ee Juba. Madaxweynaha Koofurta Sudan, Mr Salva Kir ayaa garoonka diyaaradaha ee Juba ku soo dhoweeyey, iyadoo loo tumay muusikada calanka labada dal, isla markaana kooxaha hidaha iyo dhaqanka ay halkaas ku soo bandhigeen bandhig faneed.
Ra'iisul Wasaaraha oo booqasho labo maalin ah ku jooga magaalada Baydhabo
Muqdisho, July 08,2013------Ra'iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa saaka soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa safarkiisa ku wehliya Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Cabdixakiin Maxamuud X. Faqi, Wasiirka Ganacsiga Mudane Maxamed Axmad Xasan, Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Adeegga Bulshada Maxamuud Macalin Yaxye, Xildhibaano, Saraakiil iyo Malaaqyo.
Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Faqi ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedada safarka Ra'iisul Wasaaraha isaga oo sheegay in looga gol leeyahay sidii loola kulmi lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaana maamulka gobolka, Malaaqyada, ururada bulshada rayidka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida, iyadoo diirada la saari doono sidii amni loogu soo dabaali lahaa gobolada Bay iyo Bakool.
"Si gaar ah waxaan ugu kuurgali doonaa ammaanka iyo howlaha la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha nabadiidka ah ee Shabaab" ayuu yiri Faqi oo xusay in Ra'iisul Wasaaruhu uu kulamo horudhac ah la qaatay saraakiisha ciidanka, Maamulka gobolka iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo sidoo kale Malaaqyada gobolka.
Safarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa qeyb ka ah safaro uu horay ugu kala bixiyay gobolada dalka Soomaaliya, taasoo uu ugu kuurgalayay xaaladdaha dhabta ah ee bulshada ku dhaqan gobolada, isla markaana shacabka loo gaarsiiyo qorshayaasha dawladda.
Gudoomiye Ku Xigeenka Baarlamaanka Iyo Wafdigiisa Oo Kulammo La Qaatay Madaxda Baarlamaanka Britain Iyo Mas’uuliyiin Kale “SAWIRRO”
Guddoomiye Ku/Xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo Wafdi uu hogaaminayo kusugnaa Magaaladda London ee Dalka Ingiriiska ayaa manta booqasho rasmi ah oo ay ku tageen Aqalka Baarlamaanka ee Dalka Ingiriiska ayaa waxaa halkaa si diiiran ugu soo dhaweeyay Guddoomiye Ku/Xigeenka Aqalka Baarlamaanka ee Dalka Rt. Hon Lindsay Hoyle iyo Madax sare oo ka tirsan Baarlaamnka Dalka Ingiriiska iyo kale British Group Inter-Parliamentary Group, iyadoo Guddoomiyaha Ku/Xigeenka iyo Wafdigiisaba lagu soo wareejiyay Dhammaan Goobaha Taariikhiga ah ee Aqalka iyo goobaha ay ku shaqeeyaan labada aqal ee uu ka kooban yahay Aqalka Baarlamaanka Dalka Ingiriiska (House of Common), iyagoo si qoto dheer uag wada hadlay sidii ay u sii hagaajin lahaayeen xiriirka labada Aqal iyo arrimo kale oo aad muhiim u ah waxaana uu soo dhamaadat mahadnaq iyo is-afgarad.
Wafdiga Golaha Shacabku waxay si gooni gooni ah aqoon Iswaydaarsi iyo xog waranba la qaateen madax iyo qubaro ka kala socotay Aqalka Baarlamaanka, IPU iyo Macalimiinta iyo Ardayda Jaamacadda International Relations and African Studies Students oo halkaan su’aalo iyo jawaabo ay isku dhaafsadeen Wafdiga Golaha Shacabka.
Galabnimaddii maanta 8th July 2013 waxay wafdigu Xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibada kula shireen Mr. Mark Sommonds oo ah ku Xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibada iyo Xafiiska Commonwealth ee Afrika, iyagoo halkaa uga wada hadlay arrimo badan oo la xiriira iskaashiga labada Baarlamaan iyo labada dawladoodba.
Mudane Mahad Cawad Cabdalla Cawad Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shacabka iyo guud ahaanba dowladda Ingiriiska uga mahad celiyey casuumaada ay u fidiyeen wafdigan ka socda Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen, sidoo kalena Mudane Mahad Cabdalla Cawad waxa uu aad u ammaanay sida ay Dowladda Ingiriisku u garab taagantahay xiligan Dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed.
Mr. Mark Sommonds oo ah ku Xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibada iyo Xafiiska Commonwealth ee Afrika oo isna dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa aad u ammaanay hormarrada uu sameeyey mudooyinkii ugu dabeeyey Baarlamaanka Soomaaliya oo uu Wasiirku ku tilmaamay iney horseed u yihiin isbedellada dhanka siyaasadda ah ee Soomaaliya ka jira lagasoo bilaabo doorashadii Madaxweynaha iyo Gudoonka Baarlamaanka.
Socdaalka Shaqo ee Wafdigan uu hogaaminayo Gudoomiye Ku Xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad ay ku joogaan dalka Ingiriiska ayaa qeyb ka ah dadaallada uu Baarlamaanka Soomaaliya ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo wada shaqeyntii uu Baarlamaanka Soomaaliya la lahaa Baarlamaannada Caalamka ka hor burburkii Dowladdii dhexe.